Matoa aloha nametraka fiarovan-tena teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana dia ao raha. Tsikaritra ho miady mafy fo sy saina ihany koa anefa, ka tsy hay hoe inona marina no tena ianteheran’iny rangahy iny. Ny resaka fakana fom-bahoaka aloha toa efa sarotsarotra indrindra fa ho an’ny faritra somary renivohitra, fa ny any ambany ravin-kazo sisa no mbola misy ny mpianatra sy ny zaza madinika azo terena hivoaka hihoby ny filoha sy hitondra sorabaventy. Ny zaza tsy mahalala firy izay atsimo sy avaratra amin’ny politika sisa ampiasaina e ! Hiniana hampitarazohana ve ny valin-kafatry ny HCC, dia hitarazoka eo ny tolona. Hatao ve izany izay hahakivy ny vahoaka eo anatrehan’ny raharaha mba haharava maina ny tolona ? Tsy hay na minia manadino ny tantara na efa very fitadidiana fa ny tany aloha aza anie ka 4 volana na nihoatra aza ny faharetany e ! Ekena fa samy tsy te hampitarazoka anio ny vahoaka sy ny mpitari-tolona, saingy ny tsy azo hadinoina dia ny hoe ny efa natomboka tsy maintsy hofaranana. Velirano efa natao ny hoe ny tolona tsy maintsy tafita, saingy mba manao tsipaky ny miala aina ihany koa angamba ny an-daniny fa mody mampiseho fa mafy. Sa kosa miantehitra amin’ny lazon’ady ? Efa tongotra mby an-dakana anefa ity, ka izay iray isika drodroka, hoy ilay fomba fiteny izay. Efa nandavo hatrany ny mpitondra ankehitriny rahateo io manao tsinontsinona ny mpifanandrina, ka aleo hanao ihany eo raha te hahita ny tena daoziny e !